Matt Harchick - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Umbhali woLondolozo lweMbali: Matt Harchick
Umbhali woLondolozo lweMbali: Matt Harchick
I-Metaliquid isebenzisa iteknoloji ye-net-based neatral ukuze iqonde imifanekiso yevidiyo kwaye ivelise ukuhlalutya kwimixholo yesimo semantic kunye nexesha elijongene neemfuno zevidiyo kunye noshishino lwezorhwebo. Ngokukodwa le fomu ye-AI ihluke kakhulu kwindlela yokusasaza ngelixa siqhele ukubona ukuqaphela kwezwi kusetyenziselwa ukubhalwa kwenkcazo okanye ukushicilela phantsi, ngoku ngokuqalisa phambili ...
Intlanganiso yeSizwe ye-54th yoMbutho weeNjineli zoSasazo iya kubanjwa ngo-Oktobha 2nd kunye ne-3rd, i-2018 eDanvers, MA, ikhaya kwiSahluko 11 saseBoston. Esi siganeko siya kubanjwa ngokubambisana ne-Media Resource Expo (MRE) eya kubandakanya izixhobo zeendaba kunye nemiboniso yezorhwebo yeenkonzo kunye neeseshoni zobugcisa ezininzi ezijoliswe kubanjineli beendaba, ochwepheshe, ...
URachel Matchett uye wabizwa ngokuba ngumphathi we-VFX brand, i-Technicolor Visual Effects. I-VFX brand ye Technicolor ikhula kwiprogram yomhlaba wonke kwaye iya kunika umbhobho odibeneyo weenkonzo eziza kusebenza ngecala kwiindawo ezifanayo kunye neenkonzo zeTechnicolor zesevisi zokuthunyelwa kweposi. Ngoku ngee-studios zendawo e-LA, eToronto, naseLondon le nkonzo epheleleyo iVFX ...
I-Adorama I-INSPIRE uchungechunge lweendibano zocweyo ziya kubakho ukuboniswa okhethekileyo kunye nokubonakaliswa kwezi zilandelayo ze-Hands-On Wedding Photography kunye ne-SLR Lounge, iMaternity Photography kunye ne-Tracie Maglosky, kunye ne-Stylized Children Portraits kunye neTamara Lackey. I-Adorama, ngokuqinisekileyo ungumthombo othembekileyo wefowuni-ehamba phambili, ividyo, i-audio, i-imaging kunye nemveliso yecomputer kunye nolwazi. Ezi workshops zinye ibhonasi eyongeziweyo kubathengi ...
Abahleli be-Retreat 2018 Julayi 25-29 Atlanta, GA!
I-12th yoHlomelo lwabaSebenzi boNyaka liya kuqhutywa ngoJulayi 25-29 e-Atlanta, GA. Isicwangciso solu qeqesho lweentsuku zintlanu senzelwe abaqeqeshi bezoshishino abanomncinci weminyaka eyi-5 yoovulindlela emsebenzini. Ukuba ufuna ukujoyina, kufuneka usebenzise. Le yindwendwe egcinwe kubahleli abanolwazi oluzisa iingcali zoshishino eziphezulu ...
Ikhaya elimnandi laseChicago kwiJTWO iiFilimu!
I-JTWO IiFilimu ziye zaqhubeka zilawula i-shishini kunye neqela labo eliphumelelayo lokunikezela ngokuphumelela iqela labalawuli, abavelisi, abayili bemifanekiso, abaculi beVFX kunye nabamabonakalisi bee-cinematographics malunga ne-10 iminyaka. I-JTWO IiFilimi zaqala ngokuqala ngokuthobeka kwi-2009, iofisi yabo yayingaphantsi kwegumbi lokulala lesithathu kunye nedeskiti enye kwindlu efanayo abaqeshisayo kwaye babengenayo ikhamera eyodwa. Ngoko ...
Ungaphutheli I-Los Angeles Creative Pro Progroup Group kwi-Juni 27th!
NgoLwesithathu, ngo-Juni 27th, Iqela laseLos Angeles Creative Pro, (LACPUG) liya kubhiyozela i-18th Anniversary kwi-Theater yaseThekwini eHollywood, CA eqala kwi-6: 45PM. Esi siganeko siza kubonisa i-movie yaseburhulumenteni yaseburhulumenteni yaseBradley Olsen (ngubani oya kubakho, kwaye uya kubamba umbuzo kunye neempendulo zempendulo) KUNYE I-TRACKS, i-documentary malunga neCatch Cut ...
I-2018 Inkomfa Yokugcina Ubumbano: Iseshoni Yokugcina Ubuninzi be-Content X Juni, 7!
Ingqungquthela yesibini yeNkcazo yokuThengiswa koLuntu (CS 2018) iya kubanjwa ngoLwesine Juni ngo-7, 2018 kwi-DoubleTree Hotel West Los Angeles eCulver City, CA (www.creativestorage.org). Iseshoni yamandla: "Ukugcina i-Digital Content-Iingxaki, iimfuno kunye neenketho" ziza kugxila kwi-digital storage and storage. Kukho iinkokheli zoshishino, kukho umxhesho oqhubekayo wokunyanzeliswa kwabasebenzi bethu bokubukeka ukudala, ...
I-BMI v. RMLC: Isigaba sokuSebenza kwiNkundla yeNkundla yeNkundla
NgoLwesine ubusuku (ngoMeyi 17, 2018) IKomiti yeLayisense yeMvume yeRadio Music (RMLC) yafaka isigwebo malunga ne-BMI kwinqanaba lentlawulo kwi-Federal Federal Court yaseNew York (iSithili saseMzantsi). Isiseko sokufakela i-17 inyanga eqhubekayo i-RMLC izama ukunciphisa umyinge wokuhlawula umvuzo uza kuhlawula i-BMI kwixesha le2017-2021. ...
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "I-Metaliquid yenza i-AI I-Analysis yeVideo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/metaliquid-making-ai-video-analysis-a-alityality/. Enkosi.